Ku soo dhawow koorsadan on "Abuur Dukaankaaga Dukaameysiga kujira".
Dhamaadka tababarkan, waxaad heli doontaa amar buuxa oo ku saabsan deegaanka Shopify waxaadna awoodi doontaa inaad ka dhisto dukaan A ilaa Z ah oo kuu oggolaanaya inaad sameyso iibkaagii ugu horreeyay. Waxaan duubayaa shaashadeyda waxaanan kugu hagaayaa talaabo kasta.
Koorsada ugu fiican ee bilowga ah:
Looma baahna xirfado farsamo
Maxkamadaynta 14-maalmood oo bilaash ah
Jooji waqtigaaga luminta oo toos ugulaabo barta
Ujeedada koorsadan ayaa ah in qofkasta uu ka abuuro dukaan hoosta Shopify oo uu bilaabo uruurinta iibkooda ugu horeeya.
Abuur Dukaankaaga Shopify-ka ee Drophipping Diisambar 12, 2020Tranquillus
horeMashruucayga Bilaabashadu miyuu taagnaadaa?
socdaBilaabidda Subletting on Airbnb